KUYA KUFUNEKA UZIBONELE EZI 'NTO ZIMANGALISAYO KUNYE NESILO' IZITHENDE ZOMTSHATO - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Kuya kufuneka uzibonele ezi 'Nto zimangalisayo kunye neSilo' izithende zomtshato
Kuya kufuneka uzibonele ezi 'Nto zimangalisayo kunye neSilo' izithende zomtshato
Abafana nantoni na owakha wayibona-kwaye eneneni efikelelekayo. Giphy
Umalunga nokuba yiBhola yokoqobo yebhola! Umyili wezihlangu zomtshato wesiko u-Becci Boo uthengisa ngokungakholekiyo ngobuhle, ubuhle obenziwe ngezandla kunye nezithende zesilwanyana kwivenkile yakhe yase-Etsy, Izihlangu zesiko lika-Becci Boo kunye nobuGcisa , Ukukunceda ubhiyozele usuku lwakho ngokunqwala kwincwadi yakho yothando oyithandayo.
Ezi stilettos zine-intshi zenziwe ngesikhumba esithambileyo, esintofontofo (esilungele iiyure sokuxubana kunye nokudanisa) kunye neenkcukacha ezinje ngokunyuka kwamagqabi esithendeni kwizithende kunye noyilo lweglasi olucekeceke lwe-Belle kunye neRhamncwa elingqungqa phantsi kwerose ebomvu. Yiya ngombala omhlophe weklasikhi yoyilo lwegqabi lesilivere okanye ukhethe ublue oqaqambileyo ngegolide wento encinci 'eluhlaza'.
Ngoku kongeza inyani yokuba zithengiswe ngexabiso elifanelekileyo malunga ne- $ 200 kwaye sithengisiwe. U-Becci Boo uyila izihlangu zomtshato ezininzi ezinje ngeeflat ezibukekayo zeBatman, iimpompo zedinka iMinnie Mouse kunye nobuhle kunye neebhokhwe eziphakamileyo ezenzelwe umgangatho wokudanisa.
ikhitshi emhlophe ebutofotofo
iintlobo zeendlela zokuqhuba
sisiphi isipho esihle sesikhumbuzo
Imigangatho yekhitshi engwevu